ထိုင်ဝမ်သမတက ဒေၝက်တာစင်သီယာမောင်အား ဆုခဵီးမြၟင့် | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် ထိုင်ဝမ်သမတက ဒေၝက်တာစင်သီယာမောင်အား ဆုခဵီးမြၟင့်
အာရ်အာက်ဖ်အေ (မြန်မာ) သတင်း
ထိုင်ဝမ်သမတ ခဵန်႟ွှီဗဵန် (ဝဲ)က ဒေၝက်တာ စင်သီယာမောင်အား ၂၀၀၇ခုနှစ် အာရှ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူႛအခွင့်အရေးဆုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေႛက ခဵီးမြၟင့်နေပုံ ၂၀၀၇ခုနှစ်အတွက် အာရှဒီမိုကရေစီနဲႛ လူႛအခွင့်အရေးဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ထိုင်ဝမ်မှာ ဒီနေႛ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေႛက ကဵင်းပရာ ဒီနှစ်အတွက် ဆုခဵီးမြၟင့်ခြင်းခံရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ မယ်တော်ဆေးခန်းက ဒေၝက်တာ စင်သီယာမောင်ကိုယ်တိုင် ဆုကိုလက်ခံပၝတယ်။
သတင်းအပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် http://www.rfa.org/burmese/news/2007/12/13/taiwan_awards_burmese_doctor/
Like this:Like Loading...	Written by Lwin Aung Soe December 13, 2007 at 6:42 pm
Tagged with စင်သီယာမောင်, Dr Cynthia Maung	« ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲကြ
World Focus on Burma (14-12-2007) »
Congratulations to Dr Cynthia Maung !
For your great job I always appreciate you, though I haven’t seen you.
You are, indeed, one of the pioneers of democracy and human rights for not only our Burmese people but also international community.
I wish every Burmese citizen would save our country like you.
December 14, 2007 at 4:41 am	Reply	LeaveaReply Cancel reply
Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top Postsဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံကို မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြ
ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး (သို့) ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေကို အံ့အားသင့်သွားစေတဲ့ မြန်မာ အချစ်ကဗျာ တပုဒ် မဲဆောက် မြန်မာပြည့်တန်ဆာ မိန်းကလေးများဘဝ တစေ့တစောင်း တခုလပ်တယောက်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်များ
မူဆယ်-မန္တလေး ကားလမ်းပေါ်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားခွင့်ရှိနေသော ကားအသင်း
Burma/Myanmar: Teen 'Raped And Killed By Soldiers' အဓမ္မ ပြုကျင့်မှုများ - အခြေခံ ဗဟုသုတ
Mizzima (Burmese)ပြည်ထောင်စုအဆင့် တက်နိုင်ရန် အပစ်ရပ် ခိုင်မာဖို့လိုဟု KNU ပြော August 6, 2012အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများ ရလဒ်များ မကောင်း August 4, 2012ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်ပြန် August 20, 2011ICC အမြန်ရောက်လိုသူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဦးထူးထူးဟန် July 20, 2011နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လွတ် May 17, 2011ပုဂံလက်ဆော့ March 1, 2011အင်းစိန်ဗုံး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ February 28, 2011မြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် February 23, 2011 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ပူးပေါင်းဖို့ အဆင့်သင့်လို့ အေအယ်လ်ဒီ ပြောကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးအရေး ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုမြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးမော့အောင် ဂျပန်အစွမ်းကုန် ကူညီမည်နေပြည်တော် အဝေးပြေးလမ်း မှာ မော်တော်ယာဉ်မှောက် ၁၁ ဦး သေဆုံးအမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေ လူ့အခွင့်အရေး လိုက်နာဖို့ HRW တိုက်တွန်းလူ့အခွင့်အရေး ဆွေးနွေးပွဲ မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကို တင်ပြ Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)Burma ‘more free’ than China, says US think-tank January 17, 2013Earthquake rescue teams struggle to cope November 13, 2012PepsiCo opening bottling plant in Burma November 13, 2012Doctors without Borders face barriers November 12, 20126.8-magnitude earthquake rocks northern Burma, 12 dead November 12, 2012Obama visit should firm up US policy on Asia November 12, 2012Talks with Burmese gov’t ‘fruitful’: ABSDF November 12, 2012Whether to follow Thailand’s lead November 12, 2012 BBC (Burmese)မာလီက ပွငျသဈတပျတှေ ပွနျဆုတျမယျUNFC ယူကမှော လလေ့ာရေး ခရီးရောကျရှိဂပြနျပျေါ တငျနတေဲ့ အကွှေးတှေ မွနျမာကို လြှျောပေးနိုငျတော့မလား RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldArwa Damon: Freeze-frame moments March 22, 2013It was the war everyone just wanted to forget. But fromatiny red shoe in the rubble toaresident who rebelled against al Qaeda, CNN's Arwa Damon remembers the many freeze-frame moments caused by war.Jessica Lynch, others: Where are they now? April 16, 2013Ten years ago this week, President George W. Bush announced the United States and coalition forces had begun military action against Iraq. Here'salook back at some of the people who made headlines during the war.Photos: Enduring images March 19, 2013When the tornado hit, they were ready May 24, 2013When an EF5 tornado touched down in Moore, Oklahoma, this week, Tad Agoglia and his First Response Team of America were stationed atahotel about 30 miles away, ready to take action.Troubled youth run 'old skool' bistro May 17, 2013Asajuvenile corrections officer in Southern California, Teresa Goines found it rewarding to work with troubled youth and help them turn their lives around.Pregnant and homeless: The real cost May 9, 2013Martha Ryan couldn't believe it. She had never heard of women who were pregnant and homeless. But in one night, she met three.Grieving dad helps kids get to chemo May 2, 2013For many children fighting cancer, it can be extremely tough to make it to their chemotherapy appointments.You won't believe what's in U.S. rivers April 18, 2013In the last 15 years, Chad Pregracke has helped pull more than 67,000 tires from the Mississippi River and other waterways across the United States. But that's just scratching the surface. IPS Top newsAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.Meta	Register	Log in